Indlela yokudala i-backlink ezininzi ngexesha elilodwa?
Okwangoku, wonke umntu uyazi ukuba i-backlinks ayidalwanga ngokulinganayo. Ukwakhiwa kwesiqhagamshelo kwakuyindlela elula yokucwangcisa injini ye-injini ngaphambi kokuba i-Google iqulunqe ukuhlaziywa kwayo kwePenguin. Namhlanje, ukuba ubhala amanqaku amaninzi kwaye uyabathumela kumaziko amanqaku afanelekileyo wokungeniswa, angeke anikeze iziphumo okanye enze iinjongo zenjini zokukhangela.Kwaye, khumbula, akukho mntu uyazi oko iGoogle eya kuyenza ngokulandelayo. Njalo xa uzama ukukhangela i-algorithm yosesho, kufuneka ulungele ukufumana izigwebo.
Nangona kunjalo, akusisizathu sokuyeka ukwenza nayiphi na into yokufumana ikhonkco. Endaweni yalo, kufuneka ufunde indlela yokuvelisa iinqununu eziphezulu eziphakamileyo ngendlela efanelekileyo.
Musa ukukholelwa nabani na obiza ukuba ukudibanisa isakhiwo selefile. I-backlink ihlala yinto ebalulekileyo yokuma. Nangona kunjalo, kuphela iifowuni ze-organic kunye neziphumo ezifumanekayo zingazisa umphumo.
Esi sithuba senzelwe ukwabelana nawe ngamanye amacebiso ancedo malunga nokwakha iinqununu ngendlela enokutsha.
Indlela yokwakha isiseko sokwakha isiqhelo esinempilo?
Makhe sicinge ukuba udale umxholo omtsha kwaye ufuna ukuwuxhasa kwikharityhulam yeziphumo ze-Google. Njengoko uyazi ukuba uphuculo oluphezulu lwe-PR luvela kwizixhumanisi ezisuka kwiindawo eziphezulu, akunakuqonda ukuba kuveliswe izixhumanisi ezingenayo ngokukhawuleza? Akunangqiqo ukwakha iziqhagamshelo ezininzi ezinokungena kumxholo omtsha wexesha elifutshane. Imisebenzi enjalo iya kubonakala ilungele iGoogle. Isisombululo esilungileyo kukunceda iGoogle kwaye ilandele umxholo wakho. Kuya kuthatha ixesha elithile kodwa libe nexabiso elongezelelweyo kwisayithi lakho. Xa umxholo wakho uza kuba yi-indexed, ungayifumana ijusi yekhonkco yendalo kunye nokuphucula izikhundla zakho.
Indlela yokuncedisa iGoogle nokufumana umxholo wakho?
Ukukhawulezisa inkqubo yokongqinelana kwenkcazelo, ungasebenzisa ithuluzi le-Alexa. Abakhweli beWebhu baxubusha le ndawo ngexesha lonke. Xa ufaka i-URL yecomeyini yakho kwisixhobo se-Alexa, ngokuzenzekelayo yongeza iphepha lakho elitsha, elungiselelwe kwiziko ledatha. Xa abaphandi bokukhangela baphinda baphinde bahlasele indawo yakho, isiqulatho sakho sokuqala siya kuhanjiswa yiGoogle.
Enye indlela efanelekileyo yokukhangela i-Google bots kumxholo wakho kukudala i-infographics eqhutywe kwedatha. Ingakusebenza njengemidiya yoluntu inceda ngokukhawuleza nokubonakala ngokukhawuleza. Yingakho ukuba umxholo wakho omtsha udlalwa kwiipalati zeendaba zentlalo, unikeza uphawu kuGoogle ukuba abasebenzisi bafumana umgangatho wakho wokuqukethwe kunye nezixhumanisi ezifanelekileyo. Kuthetha ukuba ngelo xesha uqala ukuvelisa izikhonkwane zangaphandle malunga nomxholo wekhontrakthi yekhwalithi, nayiphi na ikhonkco yewebhusayithi iba yendalo.
Nangona kunjalo, kufuneka uqiniseke ukuba wabelana ngokufanelekileyo kwaye luncedo kubafundi abafundi njengoko zonke iinqununu ezintsha, iposi okanye ikhonkco kufuneka zinike ixabiso elongezelelweyo kubathengi bakho abanakho.
Njengomthetho, isakhiwo esiqhelanisiweyo seseko asikhathaleli malunga nomsebenzisi wokugqibela. Nangona kunjalo, ukufumana ijusi yokuxhumela esemgangathweni kwaye ukhangele izinto zemvelo emehlweni eenjini zophando, kufuneka ugxininise kulokho abaphulaphuli abajoliswe kuyo. Abafundi bakho akufanele bazisole ngokuba balandela ikhonkco ephakanyisiweyo Source .